အောင်မြင်ကျော်ကြားလိုသူတို့အတွက် အဆိုအမိန့် ၅၀ – Gentleman Magazine
အောင်မြင်ကျော်ကြားလိုသူတို့အတွက် အဆိုအမိန့် ၅၀
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တိုင်းဟာ သူတို့ လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အလုပ်ကို ပခုံးပေါ် ထမ်းထားရတာပါ။ သင်ထုတ်တဲ့ ထုတ်ကုန်နဲ့ သင့်ဝန်ထမ်းတွေကလဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ သင့်ရဲ့ ဦးဆောင်နိုင်မှု စွမ်းအားပါ။
လူဆိုတာ ဖိအားလေးတစ်ခု သက်ရောက်တာနဲ့ စိတ်ဖိစီးသွားနိုင်ပါတယ်။ အထီးကျန်ပြီး အားကိုးရှာလာပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တိုင်းဟာ သူတို့အောင်မြင်ဖို့ အခက်အခဲတစ်ခုကို ရင်ဆိုင်တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အောင်မြင်ချင်ရင် သူတို့ရဲ့ စကားတွေကို နားထောင်ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။
သင်က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်၊ မန်နေဂျာတစ်ယောက် ဆိုရင်တောင် စိတ်ဓာတ်ကျနေချိန်မှာ ဖတ်ကြည့်ဖို့ စိတ်ခွန်အားမြင့်စေမယ့် အဆိုအမိန့် ငါးဆယ်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁. ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဟာ နောက်လိုက်တွေကို သူတို့သွားချင်တဲ့နေရာ ပို့ပေးတယ်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေကတော့ ရောက်သင့်တဲ့ နေရာတွေကို ပို့ပေးတယ်။
၂. ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဟာ လူသိမခံရင် အကောင်းဆုံးပါ။ အဲဒါမှ အောင်မြင်သွားတဲ့အခါ လူတွေက အဲဒါ ငါတို့လုပ်တာလို့ ဂုဏ်ယူနိုင်မှာလေ။
၃. သင့်ကိုယ်သင် မြင်းပေါ်မှာ ရယ်စရာကောင်းတယ်ထင်နေရင် စစ်တပ်တစ်တပ်ကို ဦးမဆောင်နိုင်ပါဘူး။
၄. အအောင်မြင်ဆုံးခေါင်းဆောင်တွေဟာ အရှင်းလင်းဆုံးလူတွေပါ။ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ပြသနာကို လူအားလုံးနားလည်လောက်အောင် ရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
၅. ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ ပထမတာဝန်က ဖြစ်နိုင်တာကို သိထားဖို့ပါ။ နောက်ဆုံးတာဝန်က ကျေးဇူးတင်စကားပါ။ ကြားထဲမှာ ခေါင်းဆောင်က ကျွန်ပါပဲ။
၆. သင့်အပြုအမူတွေက တခြားသူတွေကို ရည်မှန်းချက်ကြီးမားအောင် လုပ်နိုင်ရင် သင်ဟာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ပါ။
၇. ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ မျှော်လင့်ချက်ရောင်းသူပါ။
၈. ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ သိုးထိန်းခွေးလိုပါ။ နောက်ဆုံးမှာနေပြီး သိုးတစ်အုပ်လုံးကို ထိန်းကျောင်းနေမှန်းမသိရပဲ ထိန်းကျောင်းနိုင်ပါတယ်။
၉. နာခံဖို့မသင်ယူဖူးသူဟာ အမိန့်ကောင်းကောင်းမပေးနိုင်ပါဘူး။
၁၀. ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာ သင်ပြီးစေချင်တဲ့အရာကို လိုလိုချင်ချင် လုပ်ချင်သူတစ်ယောက် လွှတ်ပေးတတ်ခြင်းပါ။
၁၁. နောက်ရာစုနှစ်မှာ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ အင်အားကြီးသူတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
၁၂. ခေါင်းဆောင်ကောင်းဆိုတာ အပြစ်ကို များများခံယူပြီး အကျိုးအမြတ်ကို နည်းနည်းသာ ယူတတ်သူပါ။
၁၃. ရာထူးမရှိရင်တောင် လူတွေက လိုလိုချင်ချင် တင်မြှေက်တဲ့ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ။
၁၄. နောက်လိုက်တွေကို သွေး ချွေးတို့နဲ့ စတေးတာက ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နေရအောင်လုပ်တာထက် ပိုရစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစွန်းရောက်လာရင်တော့ လူတွေက သူရဲကောင်းဆန်ပါတယ်။
၁၅. နေ့တိုင်းကို ကိုယ်ဘယ်လောက် လောကကြီးအပေါ် ကောင်းကြောင်းနဲ့ စတင်ပါ။
၁၆. နေ့တိုင်းခေါင်းဆောင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
၁၇. ခေါင်းဆောင်မဖြစ်ခင်က အောင်မြင်မှုဟာ သင့်အတွက်ပါ။ ဖြစ်ပြီးတော့ သူများတွေအတွက်ပါ။
၁၈. ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အမြင်ကို မြှင့်တင်၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုပြီးမြှင့်၊ သူ့ရဲ့ဘဝကို အမြင့်ဆုံး တင်ပေးတာပါ။
၁၉. အလုပ်က လူတွေကို ညှာဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေကို တွန်းအားပေးပြီး ပိုပြီးကောင်းတဲ့ ဘဝကို ရောက်စေဖို့ပါ။
၂၀. ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ ရာထူးပေးလိုက်တာ မဖြစ်ရပါဘူး။ ရွေးကောက်တင်မြှောက်တာ ဖြစ်ရပါမယ်။
၂၁. ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဟာ သူတို့လူတွေနဲ့ သံယောဇဉ်ရှိပြီး သူတို့ကို တိုးတက်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။
၂၂. ခေါင်းဆောင်မှုမှာ ရေရှည်အောင်မြင်ဖို့က ခေါင်းဆောင်ချင်ရပါမယ်။
၂၃. ခေါင်းဆောင်နေတယ်လို့ထင်ပေမယ့် လှည့်ကြည့်လိုက်လို့ တစ်ယောက်မှပါမလာရင် အဲဒါ လမ်းလျှောက်ထွက်နေတာပါပဲ။
၂၄. ခေါင်းဆောင်မှုဟာ ခိုင်မာပေမယ့် မကြမ်းတမ်းရပါဘူး။ သနပေမယ့် မပျော့ညံ့ရပါဘူး။ စည်းကမ်းကြီးပေမယ့် အနိုင်မကျင့်ရပါဘူး။ အတွေးကောင်းပေမယ့် မပျင်းရပါဘူး။ ဂုဏ်ယူပေမယ့် မမောက်မာရပါဘူး။ အာရွှင်ပေမယ့် ငပေါကြီး မဖြစ်ရပါဘူး။
၂၅. တီးဝိုင်းတစ်ခုကို ခေါင်းဆောင်ချင်ရင် ပရိသတ်ကို ကျောပေးရပါမယ်။
၂၆. ကြီးကျယ်တာတွေလုပ်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ ကြီးကျယ်တာတွေအမိန့်ပေးဖို့က ပိုပြီးခက်ပါတယ်။
၂၇. တွေးတတ်တဲ့လူတွေနဲ့ အမိန့်ပေးနိုင်သူတွေ ခေါင်းဆောင်ဖို့အတွက် လိုပါတယ်။
၂၈. ခေါင်းဆောင်မှုက မွေးရာပါမဟုတ်ပါဘူး။ ကြိုးစားရယူရတာပါ။
၂၉. သူရဲဘောကြောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးရန်သူပါ။
၃၀. လူတစ်ယောက်မှာ အကြောင်းပြချက် ၂ ခုရှိပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်ကောင်းနဲ့ အမှန်တရားပါ။
၃၁. ဘဲတစ်ကောင်ထပျံသွားတာဟာ ဘဲတစ်အုပ်လုံးကို လွတ်စေပါတယ်။
၃၂. လူတစ်ယောက်ရဲ့အမူအကျင့်ဟာ သက်တောင့်သက်သာနေရချိန်မှာ မမှန်ပါဘူး။ အချက်အခဲရှေ့မှာ ရင်ဆိုင်ပုံကသာ အမှန်ပါ။
၃၃. အကုန်လုံးလုပ်ချင်နေရင်၊ အကုန်လုံးရချင်နေရင် ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်မလာပါဘူး။
၃၄. ပုံမှန်ခေါင်းဆောင်တွေက သူတို့အခက်အခဲကို ဖယ်ရှားပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေက သူများအခက်အခဲကို ဖယ်ရှားပါတယ်။ အကောင်းဆုံးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ ကိုယ့်ဘာသာ အခက်အခဲ ဖယ်ရှားနိုင်အောင် သင်ပေးပါတယ်။
၃၅. လူတွေကို ခေါင်းဆောင်ချင်ရင် နှိမ့်ချတတ်ပါ၊
၃၆. ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေက ငယ်သားတွေကို ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး မြင့်မားလာအောင် ထားပေးပါတယ်။
၃၇. ဥပမာပေးတာဟာ သူများတွေကို လွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းပါ။
၃၈. သင့်အပြုအမူတွေက သူများတွေကို မျှော်လင့်ချက် မြင့်မားလာစေရင် သင်က ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ပါ။
၃၉. တစ်ခါတစ်လေမှာ ခေါင်းဆောင်က ဗလာဖြစ်ပြီး နောက်လိုက်တွေက သူရဲကောင်း ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
၄၀. လူတွေဟာ တူမဟုတ်ရင်သံ၊ သံမဟုတ်ရင် တူပါ။
၄၁. ကိုယ့်ဘာသာ ခေါင်းမဆောင်နိုင်ရင် သူများတွေကိုလည်း ဦးမဆောင်နိုင်ပါဘူး။
၄၂. ကမ္ဘာ့သမိုင်းဆိုတာ အောင်မြင်သူတွေရဲ့ အထ္ထုပတ္တိပါ။
၄၃. ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ အပြစ်နှေးနှေးချပြီး ဆုမြန်မြန် ချသင့်ပါတယ်။
၄၄. ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ရာထူးမလိုပါဘူး။
၄၅. စွမ်းအား၊ မဆုတ်မနစ်တဲ့ဦးတည်ချက်နဲ့ ရည်မှန်းချက်ကောင်းတွေဟာ ကမ္ဘာကြီးကို ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။
၄၆. တခြားသူရဲ့ဖယောင်းတိုင်ကို မှုတ်တာဟာ သင့်ကို ပိုလင်းမလာစေပါဘူး။
၄၇. အောင်မြင်ဖို့အတွက် ဖော်မြူလာမရှိပါဘူး။ ကျရှုံးဖို့ ပုံသေနည်းကတော့ လူတိုင်းအကြိုက် လိုက်လုပ်ပါ။
၄၈. လိုက်နာတတ်သူဟာ အမိန့်ပေးနိုင်သူပါ။
၄၉. လူတစ်ယောက်က ကံကောင်းရင် အိပ်မက်တွေကို အရှိတရား ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်ခဲပါတယ်။
၅၀. အကောင်းဆုံးမန်နေဂျာဆိုတာ အလုပ်အတွက် အတော်ဆုံးလူတွေကို ခေါ်နိုင်ပြီး သူတို့လုပ်နေတုန်း ဝင်မရှုပ်ပဲ နေနိုင်တဲ့သူတွေပါ။
အောငျမွငျကြျောကွားလိုသူတို့အတှကျ အဆိုအမိနျ့ ၅၀
စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတိုငျးဟာ သူတို့ လုပျငနျးအောငျမွငျဖို့အလုပျကို ပခုံးပျေါ ထမျးထားရတာပါ။ သငျထုတျတဲ့ ထုတျကုနျနဲ့ သငျ့ဝနျထမျးတှကေလဲ အရေးကွီးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တကယျအရေးကွီးဆုံးကတော့ သငျ့ရဲ့ ဦးဆောငျနိုငျမှု စှမျးအားပါ။
လူဆိုတာ ဖိအားလေးတဈခု သကျရောကျတာနဲ့ စိတျဖိစီးသှားနိုငျပါတယျ။ အထီးကနျြပွီး အားကိုးရှာလာပါတယျ။ အောငျမွငျတဲ့ ခေါငျးဆောငျတိုငျးဟာ သူတို့အောငျမွငျဖို့ အခကျအခဲတဈခုကို ရငျဆိုငျတှရေ့ပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ဟာ အောငျမွငျခငျြရငျ သူတို့ရဲ့ စကားတှကေို နားထောငျကွညျ့ဖို့ လိုပါတယျ။
သငျက စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျ၊ မနျနဂြောတဈယောကျ ဆိုရငျတောငျ စိတျဓာတျကနြခြေိနျမှာ ဖတျကွညျ့ဖို့ စိတျခှနျအားမွငျ့စမေယျ့ အဆိုအမိနျ့ ငါးဆယျကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁. ခေါငျးဆောငျတဈယောကျဟာ နောကျလိုကျတှကေို သူတို့သှားခငျြတဲ့နရော ပို့ပေးတယျ။ ခေါငျးဆောငျကောငျးတှကေတော့ ရောကျသငျ့တဲ့ နရောတှကေို ပို့ပေးတယျ။
၂. ခေါငျးဆောငျတဈယောကျဟာ လူသိမခံရငျ အကောငျးဆုံးပါ။ အဲဒါမှ အောငျမွငျသှားတဲ့အခါ လူတှကေ အဲဒါ ငါတို့လုပျတာလို့ ဂုဏျယူနိုငျမှာလေ။
၃. သငျ့ကိုယျသငျ မွငျးပျေါမှာ ရယျစရာကောငျးတယျထငျနရေငျ စဈတပျတဈတပျကို ဦးမဆောငျနိုငျပါဘူး။
၄. အအောငျမွငျဆုံးခေါငျးဆောငျတှဟော အရှငျးလငျးဆုံးလူတှပေါ။ ရှုပျထှေးတဲ့ ပွသနာကို လူအားလုံးနားလညျလောကျအောငျ ရှငျးပေးနိုငျပါတယျ။
၅. ခေါငျးဆောငျတဈယောကျရဲ့ ပထမတာဝနျက ဖွဈနိုငျတာကို သိထားဖို့ပါ။ နောကျဆုံးတာဝနျက ကြေးဇူးတငျစကားပါ။ ကွားထဲမှာ ခေါငျးဆောငျက ကြှနျပါပဲ။
၆. သငျ့အပွုအမူတှကေ တခွားသူတှကေို ရညျမှနျးခကျြကွီးမားအောငျ လုပျနိုငျရငျ သငျဟာ ခေါငျးဆောငျကောငျးတဈယောကျပါ။
၇. ခေါငျးဆောငျဆိုတာ မြှျောလငျ့ခကျြရောငျးသူပါ။
၈. ခေါငျးဆောငျဆိုတာ သိုးထိနျးခှေးလိုပါ။ နောကျဆုံးမှာနပွေီး သိုးတဈအုပျလုံးကို ထိနျးကြောငျးနမှေနျးမသိရပဲ ထိနျးကြောငျးနိုငျပါတယျ။
၉. နာခံဖို့မသငျယူဖူးသူဟာ အမိနျ့ကောငျးကောငျးမပေးနိုငျပါဘူး။
၁၀. ခေါငျးဆောငျမှုဆိုတာ သငျပွီးစခေငျြတဲ့အရာကို လိုလိုခငျြခငျြ လုပျခငျြသူတဈယောကျ လှတျပေးတတျခွငျးပါ။
၁၁. နောကျရာစုနှဈမှာ ခေါငျးဆောငျဆိုတာ အငျအားကွီးသူတှေ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
၁၂. ခေါငျးဆောငျကောငျးဆိုတာ အပွဈကို မြားမြားခံယူပွီး အကြိုးအမွတျကို နညျးနညျးသာ ယူတတျသူပါ။
၁၃. ရာထူးမရှိရငျတောငျ လူတှကေ လိုလိုခငျြခငျြ တငျမွှကျေတဲ့ ခေါငျးဆောငျ ဖွဈအောငျ ကွိုးစားပါ။
၁၄. နောကျလိုကျတှကေို သှေး ခြှေးတို့နဲ့ စတေးတာက ငွိမျငွိမျသကျသကျနရေအောငျလုပျတာထကျ ပိုရစပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အစှနျးရောကျလာရငျတော့ လူတှကေ သူရဲကောငျးဆနျပါတယျ။
၁၅. နတေို့ငျးကို ကိုယျဘယျလောကျ လောကကွီးအပျေါ ကောငျးကွောငျးနဲ့ စတငျပါ။
၁၆. နတေို့ငျးခေါငျးဆောငျနိုငျအောငျ ကွိုးစားပါ။
၁၇. ခေါငျးဆောငျမဖွဈခငျက အောငျမွငျမှုဟာ သငျ့အတှကျပါ။ ဖွဈပွီးတော့ သူမြားတှအေတှကျပါ။
၁၈. ခေါငျးဆောငျမှုဆိုတာ လူတဈယောကျရဲ့ အမွငျကို မွှငျ့တငျ၊ စှမျးဆောငျရညျကို ပိုပွီးမွှငျ့၊ သူ့ရဲ့ဘဝကို အမွငျ့ဆုံး တငျပေးတာပါ။
၁၉. အလုပျက လူတှကေို ညှာဖို့ မဟုတျပါဘူး။ လူတှကေို တှနျးအားပေးပွီး ပိုပွီးကောငျးတဲ့ ဘဝကို ရောကျစဖေို့ပါ။
၂၀. ခေါငျးဆောငျဆိုတာ ရာထူးပေးလိုကျတာ မဖွဈရပါဘူး။ ရှေးကောကျတငျမွှောကျတာ ဖွဈရပါမယျ။
၂၁. ခေါငျးဆောငျကောငျးတှဟော သူတို့လူတှနေဲ့ သံယောဇဉျရှိပွီး သူတို့ကို တိုးတကျအောငျ ကူညီပေးပါတယျ။
၂၂. ခေါငျးဆောငျမှုမှာ ရရှေညျအောငျမွငျဖို့က ခေါငျးဆောငျခငျြရပါမယျ။
၂၃. ခေါငျးဆောငျနတေယျလို့ထငျပမေယျ့ လှညျ့ကွညျ့လိုကျလို့ တဈယောကျမှပါမလာရငျ အဲဒါ လမျးလြှောကျထှကျနတောပါပဲ။
၂၄. ခေါငျးဆောငျမှုဟာ ခိုငျမာပမေယျ့ မကွမျးတမျးရပါဘူး။ သနပမေယျ့ မပြော့ညံ့ရပါဘူး။ စညျးကမျးကွီးပမေယျ့ အနိုငျမကငျြ့ရပါဘူး။ အတှေးကောငျးပမေယျ့ မပငျြးရပါဘူး။ ဂုဏျယူပမေယျ့ မမောကျမာရပါဘူး။ အာရှငျပမေယျ့ ငပေါကွီး မဖွဈရပါဘူး။
၂၅. တီးဝိုငျးတဈခုကို ခေါငျးဆောငျခငျြရငျ ပရိသတျကို ကြောပေးရပါမယျ။
၂၆. ကွီးကယျြတာတှလေုပျဖို့ ခကျပါတယျ။ ကွီးကယျြတာတှအေမိနျ့ပေးဖို့က ပိုပွီးခကျပါတယျ။
၂၇. တှေးတတျတဲ့လူတှနေဲ့ အမိနျ့ပေးနိုငျသူတှေ ခေါငျးဆောငျဖို့အတှကျ လိုပါတယျ။
၂၈. ခေါငျးဆောငျမှုက မှေးရာပါမဟုတျပါဘူး။ ကွိုးစားရယူရတာပါ။
၂၉. သူရဲဘောကွောငျတဲ့ခေါငျးဆောငျဟာ ကွောကျစရာအကောငျးဆုံးရနျသူပါ။
၃၀. လူတဈယောကျမှာ အကွောငျးပွခကျြ ၂ ခုရှိပါတယျ။ အကွောငျးပွခကျြကောငျးနဲ့ အမှနျတရားပါ။
၃၁. ဘဲတဈကောငျထပြံသှားတာဟာ ဘဲတဈအုပျလုံးကို လှတျစပေါတယျ။
၃၂. လူတဈယောကျရဲ့အမူအကငျြ့ဟာ သကျတောငျ့သကျသာနရေခြိနျမှာ မမှနျပါဘူး။ အခကျြအခဲရှမှေ့ာ ရငျဆိုငျပုံကသာ အမှနျပါ။
၃၃. အကုနျလုံးလုပျခငျြနရေငျ၊ အကုနျလုံးရခငျြနရေငျ ခေါငျးဆောငျကောငျးဖွဈမလာပါဘူး။
၃၄. ပုံမှနျခေါငျးဆောငျတှကေ သူတို့အခကျအခဲကို ဖယျရှားပါတယျ။ ကောငျးတဲ့ခေါငျးဆောငျတှကေ သူမြားအခကျအခဲကို ဖယျရှားပါတယျ။ အကောငျးဆုံးခေါငျးဆောငျတှကေတော့ ကိုယျ့ဘာသာ အခကျအခဲ ဖယျရှားနိုငျအောငျ သငျပေးပါတယျ။
၃၅. လူတှကေို ခေါငျးဆောငျခငျြရငျ နှိမျ့ခတြတျပါ၊
၃၆. ခေါငျးဆောငျကောငျးတှကေ ငယျသားတှကေို ကိုယျရညျကိုယျသှေး မွငျ့မားလာအောငျ ထားပေးပါတယျ။
၃၇. ဥပမာပေးတာဟာ သူမြားတှကေို လှမျးမိုးနိုငျဖို့ တဈခုတညျးသော နညျးလမျးပါ။
၃၈. သငျ့အပွုအမူတှကေ သူမြားတှကေို မြှျောလငျ့ခကျြ မွငျ့မားလာစရေငျ သငျက ခေါငျးဆောငျကောငျးတဈယောကျပါ။
၃၉. တဈခါတဈလမှော ခေါငျးဆောငျက ဗလာဖွဈပွီး နောကျလိုကျတှကေ သူရဲကောငျး ဖွဈနတေတျပါတယျ။
၄၀. လူတှဟော တူမဟုတျရငျသံ၊ သံမဟုတျရငျ တူပါ။
၄၁. ကိုယျ့ဘာသာ ခေါငျးမဆောငျနိုငျရငျ သူမြားတှကေိုလညျး ဦးမဆောငျနိုငျပါဘူး။
၄၂. ကမ်ဘာ့သမိုငျးဆိုတာ အောငျမွငျသူတှရေဲ့ အထ်ထုပတ်တိပါ။
၄၃. ခေါငျးဆောငျဆိုတာ အပွဈနှေးနှေးခပြွီး ဆုမွနျမွနျ ခသြငျ့ပါတယျ။
၄၄. ခေါငျးဆောငျတဈယောကျဖွဈဖို့ ရာထူးမလိုပါဘူး။
၄၅. စှမျးအား၊ မဆုတျမနဈတဲ့ဦးတညျခကျြနဲ့ ရညျမှနျးခကျြကောငျးတှဟော ကမ်ဘာကွီးကို ရှနေို့ငျပါတယျ။
၄၆. တခွားသူရဲ့ဖယောငျးတိုငျကို မှုတျတာဟာ သငျ့ကို ပိုလငျးမလာစပေါဘူး။
၄၇. အောငျမွငျဖို့အတှကျ ဖျောမွူလာမရှိပါဘူး။ ကရြှုံးဖို့ ပုံသနေညျးကတော့ လူတိုငျးအကွိုကျ လိုကျလုပျပါ။
၄၈. လိုကျနာတတျသူဟာ အမိနျ့ပေးနိုငျသူပါ။
၄၉. လူတဈယောကျက ကံကောငျးရငျ အိပျမကျတှကေို အရှိတရား ပွောငျးလဲနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဖွဈခဲပါတယျ။
၅၀. အကောငျးဆုံးမနျနဂြောဆိုတာ အလုပျအတှကျ အတျောဆုံးလူတှကေို ချေါနိုငျပွီး သူတို့လုပျနတေုနျး ဝငျမရှုပျပဲ နနေိုငျတဲ့သူတှပေါ။
Previous: Gym တွေမှာ လုပ်မိတတ်တဲ့ သူများတွေကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ အပြုအမူ ၇ မျိုး